भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक, हेर्नुस् कुन समयमा छ ? - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / समाचार / भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक, हेर्नुस् कुन समयमा छ ?
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले यही कात्तिक २३ गते बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा भाइटीकाको साइत उत्तम हुने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । समितिले शुभ बेलाको साइत दिएको जनाइएको छ ।
यस वर्ष यमपञ्चक अर्थात् तिहार कात्तिक १९ गतेदेखि शुरु हुँदैछ । कात्तिक १९ गते कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन काग तिहार तथा आयुर्वेदका प्रवत्र्तक धनवन्तरि जयन्ती र यसै दिन भाण्ड त्रयोदशी पर्व पनि मनाइन्छ ।
कात्तिक २० गते कुकुर तिहार र नरक चतुर्दशी मनाइन्छ । काग र कुकुरलाई यमदूतका रुपमा मानिने गरिएको छ ।
भाइटीकाको साइत ११ बजेर ५२मिनेटमा
शुरु भयो बडादसैँ (फोटोफिचर)
काठमाडाैंमा सुरू भयो पण्डित सम्मेलन, चाडपर्वको बिदा…
आन्दोलनका बीच तराईमा सुरु भयो छठ रौनक (फोटोफिचर)
दसैं, तिहार तथा छठमा टेलिकमको भारी छुट
← Previous Story भूकम्पको साढे ३ वर्षपछि बल्ल २९ एकीकृत बस्ती बनाउने प्रक्रियामा प्राधिकरण
Next Story → आजदेखि माथिल्लो तामाकोशीको सेयर सर्वसाधारणका लागि खुला